Fanaan Xiid maxaa ku kelifay inuu sameeyo hees dhiirigelinaysa qabyaalada | Berberanews.com
Home Fanka iyo Sugaanta Fanaan Xiid maxaa ku kelifay inuu sameeyo hees dhiirigelinaysa qabyaalada
Fanaan Xiid maxaa ku kelifay inuu sameeyo hees dhiirigelinaysa qabyaalada
Soomaalidu mudooyin aad u badan waxay isticmaalayeen haybta ama Qabiilka,kaas oo ay u isticmaalaan aqoonsiga shaqsiga si loo tixraaco qof walba halka uu ka soo jeedo,waxaa jirta qorshe kale oo ka abuurmay qabiilka oo loo bixiyay qabyaalada.
Kaas oo ku salaysan u kala eexashada labada qof iyada oo la tixgalinayo hadba qabiilka uu yahay qofka.
Qabyaalada ayaa dad badan u arkaan arrin aan ku fiicnayn wada nolaanshaha dadka Soomaalida gudahooda,suugaan badan ayaa loo tiriyay sidii looga fogaan lahaa isticmaalka qabyaalada,Fannaan Cabdikariin Fuaad Xiid oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa soo qaaday hees cusub oo uu ku taageerayo qabyaalada.
”Heestan aniga ayaa sameeyey,markii hore waxaan sameeyey hees dhiggeeda ah oo aan leeyahay ka fogaada qabyaalada waa qarandumise,halka tan aan leeyahay qabyaaladu waa qaranimadeenee kor u qaadaay,waxaan dib u eegay dadkii oo aan waxba ku qaadanayn wacyi galintii fannaaniintii hore,dadkii oo ku leh qabyaalada joojiya hadana ay hoos ka wadaan qabyaaladii,Soomaali oo dhan markaan arkay in ay jecel yihiin qabyaalada ayaa u arkay in aan sidan wax ugu sheego” sidaa waxaa BBC-da u sheegay fannaan Xiid.
Fannaan Xiid ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in isticmaalka dahsoon ee qabyaalda ay dhaami lahayd in bannaanka la soo dhigo, si laysku tixgaliyo,shaqo laysku siiyo intii dastuurka been laga sheegi lahaa “waxaynu meelwalba la taaganahay qabyaaldu way xun tahay hadana waa furaha kaliya ee aan u isticmaalno meel kasta”ayuu yiri Abwaan Xiid oo sidoo kale ah majaajiliiste.
Miraha Heesta Qabyaalada
‘Qabyaaladuu ,qabyaaladuu waa qaranimadeenee kor u qaadaay,kor u qaadaay’ ayaa ka mid ah miraha heestan cusub.
Heesta waa ay sii socotaa, waxayna leedahay ‘waa taan wax ku qabsanee ,waa taan wax ku qeybsanee,waa taan quudanee’
Heesta ayaa tilmaam ka bixinaysa qaab kasta oo qabyaaladda loo adeegsado, taas oo dadka badan aysan afka ku dhufanin.
Murtida Soomaalida waxay kaalin wayn kaga jirtaa adeegisa ka hortaga in bulshada lagu faafiyo khatarta ay leedahay qabyaaladu.
Nidaamka awood qeybsiga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku salaysan habka 4.5 ee beelaha Soomaalida, waxaana ka dhashay cabasho aad u badan oo ay ka muujiyeen qeybaha kala duwan ee bulshada. Xigasho Bbc Somali
Previous article“Warka sheegaya in maxkamada layga yeedhay waxba kama jiraan” Wasiirka Gaashaandhigga Somaliland
Next article”Hawada waa laynaga xoogay” Maxamuud Xaashi